Hanjabaadda Axmed Walad Cabdalla: Sharci mise Sheeko Baraleey?
Waxa ay ahayd laba maalmood ka hor, markii ergayga gaarka ah oo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabbilsan Soomaaliya, Axmed Walad Cabdalla, uu soo saaray hanjabaad xoog badan oo ku saabsan in qofkii ama kooxdii diidda waxa ka soo baxa shirka Jabuuti ka socda uu halis ugu jiro in maxkamad caalami ah la horkeeni doono. Qormadaan gaaban waxaan ku lafaguraynaa, in hanjabaaddaasi wax qiil ah ka heli karto qawaaniinta caalamiga ah oo uu cuskanayey ergaygu.
Maxkamada Dambiyada Aduunka oo ku taalla magaalada The Hague iyo maxkamadaha kale oo khaaska ah sida tan Yugoslavia, Ruwanda iyo Sierra Leone waxaa la horgeeyaa eedaymaha ku saabsan dambiyada caalamiga ah sida isir-sifeynta dambiyada dagaalka iyo dambiyada ka dhanka ah bani’aadanimada. Dambiyadaas waxaa si wanaagsan loogu sharraxay Hashiiska Rome oo lagu unkay Maxkamadda Dambiyada Adduunka (Qodobada 5 illaa 8).
In la diido ama laga horyimaado heshiis ma ahan dambi caalami ah oo laysku maxkamadayn karo. Waa arrin mar walba dhacda in marka kooxo ama waddammo la wada hadashiiyo in koox walba ay fiiriso danta ay matalayso, haddii ay dantaas ka dhex arki weyso heshiiskana ay diiddo. Arrinka Soomaaliyana, dadka Soomaaliyeed waxa ay dagaal xaq ah kula jiraan ciidamada Itoobiya oo si sharci darro ah ugu soo duulay dalka Soomaaliya, kana gaystay dambiyo caalami ah. Waxaan filayaa in ergayga gaarka ah uu arinkaas ogyahay ama ay tahay in uu ogaado.
Labaatankii sano oo lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka dhacay dambiyo caalami ah oo siweyn loo diiwaangeliyey, ilaa haddana qofna maxkamad looma soo taagin. Dambiyadaas waxaa ugu dambeeyey uguna waaweynaa dambiyada dagaalka iyo kuwa ka dhanka ah bani’aadanimada oo kuwa ugu badan ay ciidamada Itoobiya iyo malayshiyada Dowladda Kumeel Gaarka ah ka gaysteen Soomaaliya. Dambiyadaas waxaa si weyn u diiwaangaliyey hay’sadaha u dooda xuquuqda aadanaha sida Amnesty International, Human Rights Watch iyo hay’ado kale oo caamali iyo wadani iskugu jira. Haddaba ayada oo ay jiraan dambiyo caalami ah oo Soomaaliya ka dhacay maxaa keenay in ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya, Walad Cabdalla, in uu soo jeediyo hanjabaad uu ogyahay in ayna qiil helayn? Hanjabaaddaan oo kale waxaa horay u soo jeediyey waqtigii uu socday shirkii Mbagaati, Kiplagat oo ahaa ninkii daadihinayey shirkaas. Marka Kiplagat hanjabaada jeedinayey waxaa shirka fadhiyey inta daban qabqablayaashii dagaalka Soomaaliya oo lagu eedayayey in ay gaysteen dambiyo caalami ah. Ayada oo ay taasi jirto, waxa uu doortay in uu u hanjabo qofkii diida waxa ka soo baxa heshiiskii eedeysaneyaasha lagu boqrayay.
Hanjabaada ergayga gaarka ah, Axmed Walad Cabdalla, waxaa loo fasiran karaa siyaabo kala duwan:
Tan koowaad, in shirka meesha ka socdaa uu yahay maaweelo oo hadallada kale oo uu sheegana ay yihiin kuwo aan macne lahayn oo lamid ah hanjabaaddaan oo kale.
Tan labaad, waxaa laga yaabaa in uu la kulmay dad badan oo Soomaaliyeed oo iska raaca hadalka uu soo jeediyo, una haysta sharci, oo uu markaas u qaatay in Soomaalidu ay dhammaan kuwaas la mid yihiin, waxkasta la marsiin karo. Midda ay noqotaba, waxaa hubaal ah in aan qaabkaas xal looga gaari karin arrimaha cakiran ee Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la gudboon ergayga gaarka ah iyo ciddii kale oo danaynaysa arrimaha Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed lagu caawiyo in maxkamad la horkeeno dadka ka galay dambiyada caalamiga ah oo aan markaan loo baahnayn in lagu hadaaqo hadallo aan waxba ku fadhin, oo u macno eg: sax iyo khalad saan rabo yeel, haddii kalena waa maxkamad !. Waa xaqiiqo in ay muhiin tahay in heshiis laga gaaro ariimaha Soomaaliya, lakiin khubaro badan ayaa qabta in maxkamadaynta dadka dambiyada galay, ay qayb weyn ka tahay xal u helidda dhibaatada daba dheeraatay ee Soomaaliya.
Ahmed Ali M. Khayre